Pejy 2 amin_ny 33
Manivana ireo vaovao momba an'i Isiraely sy i Palestina ve ny Facebook? (2009)
Israely10 Septambra 2019
Koa satria efa mihalasa ho sehatra fikarakarana sy fiadiankevitra ny Facebook, maro no mahatsikaritra ny votoatiny ho manjavona. Manadihady ireo fitarainana avy amin'ny bilaogera arabo sy isiraeliana i Jillian York ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ejipta29 Aogositra 2019
Toa ny ankamaroan'ny lahatsoratra avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Ejipsiana no miezaka mitady valiny amin'ireo nahoana sy ahoana marobe ao an-dohan'izy ireo.
Jordania: Ny fifandraisana ao Gaza
Jordania28 Aogositra 2019
Raha mbola manohy ny fanafihany an'i Gaza ny Israeliana, mandeha mihoatra noho ny fanamelohana ny herisetra ireo bilaogera Jordaniana ary mamadika ny tenin'izy ireo sy ny fihetseham-pon'izy ireo ho asa mivaingana. Fanentanana Komity 7iber/Action manangona ireo fanomezana ankoatra izay nomanin'ny mpikarakara azy.
Palestina: miantso mifananihany amin'ny tafika israeliana
Israely27 Aogositra 2019
Miaraka amin'ny balafomanga sy baomba, andrarahana taratasy kely (flyer) ny Palestiniana ao Gaza, izay mangataka azy ireo mba hamono ireo mpikomy Hamas sy handositra ny tranon'izy ireo.
Palestina: “Tsy fantatr'izy ireo hoe ho velona ve izy ireo”
Israely19 Aogositra 2019
Izany no nahatonga an'i Mohammad, monina ao Ramallah saingy avy any Gaza, nanomboka ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe "Mahazatra kokoa noho ny torimaso ny fahafatesana" Nandritra ny 17 andro, hatramin'ny nanombohan'ny fanafihana voalohany tao Gaza, nizara ny antson'ny fianakaviana ao amin'ny KABOBfest i Mohammad mba hahafahan'izao tontolo izao mandre ny tantarany.
Palestina: Niteraka fanehoan-kevitra teo amin'ireo bilaogera ny daroka an'habakabaka Israeliana (2008)
Ady & Fifandirana16 Aogositra 2019
Taorian'ny fiafaràn'ny fampitsaharana ady teo amin'i Israely sy ny Hamas, dia nitombo ny herisetra sy ny fifandonana teo amin'i Israely sy i Gaza. Namely an'i Gaza i Isiraely tamin'ny daroka an'habakabaka nahafatesana 210 ary mihamitombo izany isan'ny maty ao Gaza izany.
Israely11 Aogositra 2019
Ejypta: Bilaogera miresaka momba ireo “Zanakalahin'ny Ziona”
Ejipta08 Aogositra 2019
Mety hoe nijanona tsy nianjera ny baomba tao Gaza, saingy mbola mitohy ny ady an-tserasera goavana, amin'ireo bilaogera amin'ny andaniny sy ankilany manetsiketsika ny vondrony mba 'hanongotra' ny fisian'ny hafa - farafaharatsiny ao amin'ny aterineto. Bilaogera Ejiptiana roapolo mahery no manambana ady amin'ny tafika bilaogera Israeliana.
Ity herinandro ity tao amin'ny bilaogy Palestiniana : Oran-dohataona
Ady & Fifandirana20 Jona 2019
Hetsi-panoherana am-pilaminana hafa nivadika ho korontana ny herinandron'ny 11 Aogositra...nitifitra mpanao fihetsiketsehana tamin'ny bala fingotra sy baomba mankarenina ireo miaramila Israeliana. Nitatitra ny International Solitary Movement hoe efatra ambinifolo ny olona naratra, nisy Israeliana iray mpikatroka mafana fo . Ny Bethlehem Bloggers no nahazo fampitam-baovao voalohany avy amin'ilay mafana fo...